Akụkọ - Ozi ọma: CHINA BAOYUAN bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta nkwado maka iwu MT1650 ọhụrụ igwe mgbasa ozi igwe anaghị agba nchara na MINGKE.
Sistemụ usoro nhazi eriri igwe
Nlereanya eriri igwe
Ọrụ eriri igwe
Ụlọ ọrụ panel nke dabeere na osisi
Nkedo ihe nkiri
Ozi ọma: CHINA BAOYUAN bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta nkwado maka iwu MT1650 ọhụrụ igwe mgbasa ozi igwe anaghị agba nchara na MINGKE.
Ọkt 22nd, 2021, China Baoyuan bịanyere aka na nkwekọrịta nkwado maka usoro nke ọhụrụ MT1650 igwe anaghị agba nchara nchara na Mingke.Emere emume mbinye aka n'ụlọ ogbako nke Baoyuan.Mazị Lin (General Manager of Mingke) na Mr. Cai (Chairman of Baoyuan) bịanyere aka na nkwekọrịta n'aha akụkụ abụọ ahụ iche.
Mazị Lin (GM nke Mingke, aka ekpe), Maazị Cai (Onye isi oche nke Baoyuan, aka nri)
Njikọ mbụ dị n'etiti ụlọ ọrụ abụọ anyị bụ na 2018, n'otu aka ahụ, a na-enye eriri MT1650 & kwadebere maka ahịrị pịa Dieffenbacher iji mepụta MDF tumadi.Dabere na ezigbo ntọala maka imekọ ihe ọnụ na ntụkwasị obi na akara Mingke, nke a bụ oge nke abụọ Baoyuan Wood na-etinye usoro eriri igwe na Mingke.
Ụlọ ọrụ Hubei Baoyuan Wood Industry Co.,Ltd.(Abreviated Baoyuan Wood) e hiwere na 2002, ma dị na Ziling Town, Dongbao District, Jingmen City, Hubei Province, China.Ike mmepụta nke ogwe osisi sitere na osisi bụ 500,000 cubic mita.Ọ bụ ụlọ ọrụ na-eduga mba na nrụpụta ọrụ ugbo, ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu, yana ụlọ ọrụ ngosi ihe onwunwe nke mba.Site na ike mmepe ngwaahịa ọhụrụ ya siri ike, ọ na-anọgide na-enwe ọnọdụ isi na ụlọ ọrụ ụlọ.Ka ọ dị ugbu a, ọ nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu narị ngwaahịa na ngalaba ise: Baoyuan Medium Density Fiberboard, Baoyuan OSB Flame Retardant Board, Baoyuan OSB Plywood na Baoyuan OSB Eco Board, nke a na-ere na mpaghara 31 (obodo na mpaghara kwụụrụ onwe) n'ofe mba ahụ. .Kemgbe e guzobere OSB R&D center site na Baoyuan Wood na 2011, ọ na-aga n'ihu na-ebupụ ọtụtụ teknụzụ dị elu na ngwaahịa ọhụrụ na ụlọ ọrụ OSB.
Oge ọ bụla nnabata ndị ahịa bụ ihe agbamume nye anyị.Ebe ọ bụ na anyị guzobe, Mingke enyela ọtụtụ ụlọ ọrụ ike dị ka ogwe osisi, kemịkalụ, nri (nri na friza), nkedo ihe nkiri, eriri ebu, ceramik, ime akwụkwọ, ụtaba, wdg. N'ọdịnihu, Mingke ga-esi ọnwụ na-emepụta ọ bụla. eriri ígwè nwere ọgụgụ isi, ma nọgide na-enye ndị ahịa ike na ụlọ ọrụ dị iche iche.
Mara: Ụfọdụ foto na okwu ndị dị n'isiokwu a sitere na netwọkụ, ọ bụrụ na ọ na-etinye aka na mbipụta nwebisiinka, biko kpọtụrụ Mingke n'oge, anyị ga-akpọtụrụ nkwado ma ọ bụ ehichapụ n'oge.
Oge nzipu: Ọktoba 22-2021
Nke gara aga: MINGKE gara nzukọ ọmụmụ ihe mmepe ụlọ ọrụ mba 2021
Osote: Ozi ọma: CHINA LULI GROUP nyere iwu MINGKE MT1650 eriri igwe anaghị agba nchara n'ime nrụpụta n'ime ụlọ mgbasa ozi-PANEL.
Tel:+86 173 0160 1676
Faksị:+86 21 3361 6576
Rm.1906, CapitaLand Minhang Plaza, Nke 6088 Humin Rd., Minhang Dist., Shanghai 201199, China
CT1100 Agbasie Ike & Ọkpụkpọ Carbon Steel Belt
CT1300 Agbasie Ike & Ọkpụkpọ Carbon Steel Belt
DT1320 Igwe Ọdụdọ Carbon Steel Dual
DT980 Igwe anaghị agba nchara nchara
Igwe flake 9 adịkwaghị
igwe flaking chemical
© Nwebiisinka 20102021: Mingke ikike niile echekwabara.
Akaụntụ gọọmentị WeChat